असफल हुने मानिसका १० लक्षणहरु !! यस्ता छन् !! - Enepalese.com
असफल हुने मानिसका १० लक्षणहरु !! यस्ता छन् !!
इनेप्लिज २०७६ असार २ गते २०:४० मा प्रकाशित
जीवनमन्त्र डेस्क । संसारका अधिकाँश सफल मानिस पहिले असफल थिए । असफलताको सिढी चढेर नै उनीहरु सफल भएका हुन् । तर कतिपय मानिसहरु आफू असफल भएकोमा भाग्यलाई दोष दिएर बस्छन् । उनीहरु असफल हुनुको कारण खोजी गर्दैनन् तर भाग्यलाई धिक्कारी रहन्छन् । यहाँ असफल हुने ब्यक्तिका १० लक्षणबारे चर्चा गरिएको छ ।
यी बानी हटाउँदा सफलताको ढोका आफै खुल्छ ।१- विनायोजना कामःजसले विना योजना काम गर्छ उसले सफलता पाउने सम्भावना निक्कै कम हुन्छ । यस्ता ब्यक्तिले कुनै पनि कुराको योजना बनाउँदैनन् सबैकुरा भगवान भरोसा हुन्छ । तर भाग्य नभएको भन्दै पछुताउँछन् ।